Fanapahana noraisin’ny HCC: efa nampoizin’ny KMF/Cnoe ny «Azo raisina fa tsy mitombina» | NewsMada
Tsy niandry ela na efa mahazatra aza. Nitondra va­lin-kafatra avy hatrany manoloana ny fanapahana noraisin’ny HCC amin’ny fitoriana nataony ny eo anivon’ny KMF/Cnoe. « Efa nampoizina ihany io fanapahana io taorian’ny fanambarana nataon’ny filohan’ny HCC tamin’ny mpanao gazety, ny alarobia lasa teo. Gaga izahay satria efa hita soritra mialoha ny valiny navoaka ampahibemaso nefa toa mbola tsy nandeha akory ny fitsarana ny raharaha », hoy ny fanambaran’izy ireo, omaly. Mazava anefa ny fahitan’ny KMF/Cnoe ny raharaha fa voahitsakitsaka ny zo maha mpifidy ireo olomboafidy sasany, mbola miandry ny valin’ny raharaha eny anivon’ny filankevi-panjakana. Ho very zo ireo kaominina sasany mbola tsy nahavitana fifidianana, hatreto.
Tsy azo ivalozana ny didin’ ny HCC
Tsy mahazo ny hasina sy ny zo tokony ho azy ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana sasany : faritra sy ny faritany, efa tokony hipetraka ka hanana mpifidy nefa mbola tsy manana olona voafidy araka ny Lalàm­pa­no­renana, hatramin’izao. Eo koa ny tsy fanajana ny lalàm-pifidianana ny amin’ny fotoana tokony hanatanterahana fifidianana…
Na izany aza anefa, niaiky ny KMF/Cnoe fa tsy azo ivalozana ny didy sy ny fanapahana navoakan’ny HCC ka tsy maintsy hirosoana ny fifidianana. Naneho fahavononana handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana ho avy izy ireo. “Mba ho fifidianana tsy handiso fanantenana. Manainga ny mpisehatra rehetra mba hanaja sy hampanaja ny lalàna manan-kery”, hoy ihany izy ireo.
Tsiahivina fa samy tsy afa-bela amin’ny “Azo raisina fa tsy mitombina” ny fitorian’ny KMF/Cnoe sy ny Anteni­mi­e­ran­­doholona, navoakan’ny HCC, omaly.